General - Creativos Online | Creativos Online (Pejy 6)
Ultraviolet no loko nofidian'i Pantone ho an'ny taona 2018. Loko iray izay mandray ny zava-miafina sy ny fikarohana teknolojia vaovao sy ny fikarohana an-habakabaka.
Inona avy ireo tombony sy fatiantoka entin'ny mpamorona logo? Fiasan'ny mpamorona sary famantarana. Famolavolana logo haingana
Makà sary karipetra amin'ny hotely manerana an'izao tontolo izao ary mahazoa mpanaraka 500 XNUMX ao anatin'ny herinandro
Ity mpampiasa ity, noho ny zanany vavy sy ny hamafisiny naka sary ny rug erak'izao tontolo izao, dia nahazo mpanjohy maherin'ny 500 tao amin'ny Instagram.
Adiny 160 hamoronana ity fomba fijery 600 megapixel an'ny lanitra Manhattan ity
Mpaka sary iray naka sary 189 mahery tao anatin'ny herintaona hanamboarana ny famaritana avo lenta izay mampiseho ny faritry ny tanànan'i New York.
Ny Getty Museum dia manome boky zavakanto 250 ho an'ny olona rehetra azonao sintonina amin'ny PDF na zahana amin'ny Google Books.
Azonao atao ny manantena ny fanavaozana ny Photoshop CC vaovao izay hitondra fitaovana vaovao: Safidio ny Lohahevitra.
Raha mpanao sariitatra ianao, mpianatra na mpanentana, Storyboarder dia fitaovana maimaim-poana tonga lafatra amin'ny famoronana tantara amin'ny Windows, Mac ary Linux.
Ity kaonty Twitter ity dia afaka mandoko ny sarinao amin'ny loko mainty sy fotsy amin'ny fomba maimaimpoana sy mandeha ho azy mba hahagaga anao.
Toy izao no namerenana ny sangan'asa taonjato faha-XNUMX
I mold dia mpivarotra zavakanto izay amin'ny alàlan'ny Twitter dia mampiseho ny asa mafy hamerenana amin'ny laoniny ny sary tamin'ny taonjato faha-XNUMX
Ny Wacom Pro Pen 3D dia fitaovana vaovao amin'ny famolavolana, famolavolana ary famoronana
Ny bokotra fahatelo amin'ny Wacom Pro Pen 3D dia hampiasaina hanomezana andraikitra fanampiny izay mamonjy fotoana tsy hiatrehanao ny klavier.
Ity mpaka sary ity dia mirakitra ny fandehan'ny taona tao anatin'ny andian-olom-pirenena tao New York
Funch no mpaka sary tompon'andraikitra amin'ny fitondrana anay an'io ranomasina io izay tondra-drano manerana ny arabe ao New York tao anatin'ny 9 taona.
Mandraisa anjara amin'ny fifaninanana Adobe izay tokony hihaika ny fomba fijerinao
Miandry anao ny loka marobe amin'ny fifaninanana Adobe vaovao izay ny teny hoe fahalalahana no lasa axis centre an'ny lohahevitra hovolavolaina.
Hampiditra ny teknolojia Cloak ao anaty programa isan-karazany i Adobe izay ahafahanao manala ireo singa amin'ny horonantsary voarakitra. Endri-javatra mahavariana.
Adobe dia nanavao ny Lightroom CC miaraka amina interface vaovao sy fitaovana vaovao marobe, ary koa mifototra amin'ny rahona tanteraka.
Saitoh dia mpanakanto japoney iray izay mamela anay talanjona noho ny fahasoavan'ireo sary sokitra tsirairay avy sy ny famirapiratan'izy ireo amin'ny haben'ny fiainana.
Andre D. Wagner dia mitondra antsika any amin'ny lalamby ambanin'ny tanànan'i New York izay nalainy naka sary ireo andalan-teny isan'andro izay nitondra azy nody tany am-piasana.
Sary famantarana kolontsaina pop voasokitra anaty voatavo ho an'ny Halloween
Manakaiky ny alin'ny Halloween ary toy ny isan-taona, miantso antsika izy mba hitafy izay akanjo mifandraika amin'ny fampihorohoroana.
Ity misy fomba 156 olona misintona logo malaza amin'ny fahatsiarovana
Azonao atao ve ny mahatadidy ny famolavolana sy ny lokon'ny sary famantarana iray? Ity no antony iorenan'ity tranonkala ity.
Ny Golden Ratio dia fitsipika ampiasaina hamoahana ny teboka tsara indrindra amin'ny famoronana zavakanto. Izy io koa dia mety ho hita amin'ny natiora.
Ny lamaody "makiazy galaxy"
Ny "Galaxy Freckels" dia fironana haneho fomba hafa hanamboarana endrika ary ireo kintana, kintana ary planeta no mameno ny endrika.
Andro tokony hanaovana fanovana hoditra. Samy ho an'ny tarehy, tànana na tongotsika, izay tianao indrindra. Ho an'ny tenantsika, ho an'ny namana na mpianakavy.
Nasehon'i Banksy indray ny kanto tamina graffiti tamin'ny 2015 izay mampiseho zebra iray mijoro eo akaikin'ny vehivavy afrikanina zokiolona iray mikarakara ny dian-kapohany.
"Fanontaniana miloko" miaraka amin'ny Photoshop.
Androany izahay dia hampianatra anao ny vokatry ny loko Photoshop, izay manampy anay hihataka haingana.
Ahoana ny fandokoana sary amin'ny Photoshop haingana
Ahoana ny fandokoana sary amin'ny Photoshop haingana amin'ny fianarana ny fomba madio indrindra ho an'ny ankizy hahafehy ireo fitaovana fototra azo alaina sary amin'ny Photoshop
Raha iray amin'ireo olona tia famolavolana ianao dia tsy maintsy efa nandre momba an'i CDay, hetsika fanao isan-taona ataon'i Cutedrop, izay tsy azonao hadinoina izany.
Inona no atao hoe famolavolana? Izy io dia zavatra iray izay afaka manampy antsika amin'ny fiainantsika amin'ny fomba maro satria manampy antsika hamorona mahomby kokoa izany. Famolavolana no zava-drehetra.
Tian'ireo mpamolavola hahatakatra ny zava-drehetra ny mpanjifany, ka ireto misy toro-hevitra vitsivitsy hanatsarana ny serivisy ho an'ny mpanjifa, ka mariho.
Ampianarinay ianao hanala na hametraka sary any ambadiky ny fitaovana fifantina haingana, izay hahafahanay esorina ao anaty jiffy ny background.
Mba ho mpamorona sary mahay ianao dia mila mahafantatra ny fomba fahitana sy fandinihana ny tontolo iainanao, ka jereo ny torohevitra omenay anao amin'ity lahatsoratra ity.
Te hihaona amin'ny olona manana ahiahy mitovy amin'izany ve ianao? Aleonao mandamina hetsika iray hanambarana ny asa ataonao? Fihaonana no tadiavinao.
Ny fiasana amin'ny maha-Freelancer dia matetika iray amin'ireo nofinofy lehibe ho an'ny mpamorona, satria mamela azy ireo hanana fahaleovan-tena manokana.
Mpanakanto sary inona no mamolavola an'i Google Doodles? dia fanontaniana iray izay nanontaniantsika rehetra ny tenantsika rehefa mahita ny fonony famoronana ao amin'ny Google.
Androany dia manolotra tutorial izahay izay hamela anao hamorona ny vokany "Andy Warhol", ireto ny dingana hamoronana azy, ka mariho tsara.
Mety ho hafahafa ihany izany, na izany aza, ary raha ny tena izy, tsara kokoa raha mahay mianatra mianatra any amin'ny oniversite ireo mpamorona, koa mariho.
Torohevitra manokana hanombohana dingana famolavolana
Raha anisan'ny vondron'olona te hanomboka sehatra famolavolana ianao dia ho lavorary ity lahatsoratra ity, ka mariho.
Coca-Cola sary famantarana iray izay maharitra ny fandehan'ny fotoana noho ny asan'ny orinasan-tsoratry ny orinasa tsara, niova kely ihany ny sary famantarana hatramin'ny nanombohany.
Tianay haseho anao ny hevitra maro izay mety hanampy tokoa, izay handinihanay tsara ny raharaha asa maimaimpoana tsirairay mba hanakaramana anao imbetsaka.
Hanome anao torohevitra vitsivitsy izahay izay tsy hanampy anao hanatsara ny fahaizanao rehefa manatanteraka ny asanao amin'ny maha-mpamorona anao, fa koa amin'ny isan'andro isan'andro.
Inona no azonao ampiasaina ho referansa mandritra io fotoana aingam-panahy io? Noho io fanontaniana io dia hiresaka momba ny studio fanaovana sary mihetsika dimy isika amin'ity lahatsoratra ity.
Ny maha-zava-dehibe ny psikolojia ny loko amin'ny zavakanto sy ny endrika
Ny maha-zava-dehibe ny psikolojia ny loko amin'ny zavakanto sy ny endrika dia manampy antsika hiteraka ireo fihetsem-po sy fahatsapana tadiavintsika.
Ny asanao dia misy sanda ary raha tena te-hohajaina ianao noho ny kalitaony dia tsy maintsy ampandoavinao izay heverinao fa mendrika ny asanao, izany no resaka.
Fomba analog na fomba nomerika, ity dia iray amin'ireo fanontaniana izay matetika koa tonga ao an-tsain'ny mpamorona sary.
Ilay mpaka sary Joni Sternbach dia fantatry ny sarin'ireo mpaka sary onjam-peo mampiasa teknika tamin'ny taonjato faha-XNUMX.
Ny fantatsika amin'ny maha kanto nomerika azy dia eo an-tampony, misaotra ireo mpanakanto avo lenta niaro azy io ary nanao azy ho isan'izy ireo.
April Greiman dia fantatra amin'ny endrika mpamorona sary, teraka tany Etazonia tamin'ny 1948.
Mamorona alokaloka azo tanterahina haingana miaraka amin'ny Photoshop mba hahatonga ny sarinao sarina hanana famaranana matihanina sy azo tanterahina bebe kokoa.
Ny fanontana 3D dia sehatry ny vaovao iray izay ahitàna ireo tetik'asa famolavolana telo habe hadika amin'ny tontolo tena izy.
Milton Glaser ilay mpamorona ao ambadiky ny Tiako i New York dia nahavita nisolo tena an'i New York City miaraka amina marika izay tadidy hatrany.
Zavatra tokony hialana amin'ny volavola rehefa mametraka lahatsoratra isika mba hahomby kokoa amin'ny volavolantsika ary hahatratra ny mpihaino marobe.
Raha mila mamorona logo maimaim-poana amin'ny tranokala, youtube na bilaogy ianao ary tsy fantatrao ny fomba, eto dia hasehonay anao ireo tranonkala sasany ahafahanao mamorona logo maimaim-poana.
Ovay amin'ny loko Photoshop amin'ny fomba matihanina ny lokon'ny molotra, hahatratrarana valiny tena azo tanterahina ho an'ny fotoam-pivoriana sy ny fikitika an-tsary.
Ny mpianatra mianatra famolavolana sary dia tsy maintsy manatanteraka izay nianarany tamin'ny asany ary ireo no dingana tokony ho fantatra raha tena nahalala izy.
Fotoana mety hijerena izao izay ho fironana handrafitra ny ho avin'ny typografia amin'ny famolavolana, koa aza adino ity lahatsoratra ity.
Inona ny tantaran'ny sary famantarana Google? Ny logo azy dia nandalo fiovana maro mandraka androany lasa litera tokana. Jereo hoe iza avy ireo
Ny orinasan-kalifornia any Google dia nanangana tranokala vaovao fantatra amin'ny anarana hoe Google Open Source.
Ny maha-zava-dehibe ny famolavolana amin'ny fivarotana an-tserasera
Niaiky i Juan Roid fa ny tranokalan'ny Mercadona dia "mokaoka" ary manamafy ny fanovana lehibe ho an'ny taona 2018.
Fandraisana andraikitra amin'ny fotoanan'ny krizy
Tsy misy toe-javatra ratsy kokoa noho ny amin'ny fotoanan'ny krizy, ka mety ilaina ny manapahana ny vidiny sy ny fitaovana.
Ny tabilao dia iray amin'ireo safidy mahomby indrindra sy mahomby indrindra raha ny fampiharihariana ny fihetsiky ny isa.
Taorian'ny fihaonambe fanao isan-taona antsoina hoe MAX any San Diego ary notontosain'ny Adobe, ity orinasa ity dia nanapa-kevitra ny hanararaotra ny…
Mitady endritsoratra fanoratana tanana? Aza adino ny fanangonana fonon-tsoratry ny tanana miisa 60 izay manahafana ny soratra nosoratan-tanana tena voajanahary.
Ity famolavolana ny Windows 10 ity dia manome antsika hevitra momba ny mety ho tetikasa Neon
Ilay antsoina hoe Tetikasa Neon dia maneho ny iray amin'ireo hevitra famolavolana manana fanantenana lehibe indrindra avy amin'ireo mpampiasa an'ity sehatra ity.
Ny maha-zava-dehibe ny marika amin'ny tetikasa sary
Ny maha-zava-dehibe ny marika amin'ny tetikasa sary dia mahatonga ny marika iray hisolo tena ny tena toetrany amin'ny fanaovana mazava ny toetrany sy ny fomba fiasany.
Mitady fanasana mariazy MAIMAIMPOANA? Aza adino ity fanangonana fampakaram-bady sy modely fanasana fankalazana ity.
Tadiavo ny typeface ilainao amin'ny famolavolana anao
Tadiavo ny typeface ilainao amin'ny famolavolana anao amin'ny fampiasana fitaovana ilaina ho an'ny mpamorona tsirairay. Mianara manoratra lahatsoratra amin'ny maha-matihanina anao.
Androany dia nanangona hevitra 12 izahay, andian-teny miaraka amin'ny fanoharana izay miresaka teboka lehibe momba ny famolavolana sary toa ny matihanina.
Mpanakanto sary mamadika ny sarin'ny zanany ho sary hosodoko nomerika
Ny mpanakanto sary dia mamadika ny sarin'ny zanany ho sary hosodoko nomerika azo antoka fa feno eritreritra. Resaka famoronana ity mpanakanto ity.
Mahatadidy ny fiainam-piainan'ny mpamorona endrika Kolombiana Dicken Castro
Dicken Castro, mpanao mari-trano malaza ary mpamorona sary avy any Kolombiana izay nodimandry tamin'ny 21 Novambra 2016 teo amin'ny faha 95 taonany.
Karatra fandraharahana tsy miala amin'ny lamaody mihitsy
Tsy hitako ny fomba tsara indrindra hamelana ny angon-drakitra ataon'ny orinasanao, serivisy, asanao sns, eo am-pelatanan'ny antoko fahatelo ary eo noho eo.
Amin'ity taona ity isika dia manana fironana famolavolana vaovao antsoina hoe 'uppercasification' izay mahavita mamorona effets telo-refy raha jerena voalohany.
Fomba fiasa miaraka amin'ny mpamorona amin'ny tetikasa sary
Ny fomba fiasa miaraka amin'ny mpamorona amin'ny tetikasa sary dia zavatra tokony ho fantatry ny mpanjifa. Mianara manabe ny mpanjifa amin'ny maha mpamorona anao.
Teraka tamin'ny 3 taona lasa teo ity hetsika ity rehefa nanapa-kevitra ny hamorona mpamorona endrika sary manokana amin'ny tambajotran-tseraseran'izy ireo ny mpamorona roa
Mamorona blur amin'ny horonan-tsary miaraka amin'ny Adobe Premiere ary mahazoa valiny matihanina ho an'ireo tetikasan-tsofinao. Hatsarao ny fanovana horonan-tsary nataonao.
Ny Curriculum iray feno tsara dia manome zavatra betsaka holazaina raha mpamorona sary ianao, vao mainka aza raha manam-pahaizana momba ny programa sy rindrambaiko manamora ny asanao ianao.
Inona avy ireo toetra tsy maintsy ananan'ny solosaina iasantsika?
Inona avy ireo singa tokony hananan'ny solosainao, ka io no tsara indrindra rehefa miasa miaraka amin'ireo tetik'asa famolavolana anao?
Androany dia hitsangatsangana isika amin'ny alàlan'ny studio famoronana sary izay misongadina noho ny fahaiza-mamorona, ny hatsarany, ny fahaizany miova ary ny singa hafa.
Kilalao kilalao ikea noforonin'ny ankizy ho an'ny ankizy
Kilalao malefaka ikea noforonin'ny ankizy ho an'ny ankizy amin'ny fampielezan-kevitra ara-tsosialy dia namela ny ankizy erak'izao tontolo izao hamolavola ny kilalao malefaka azy ireo.
Inona no azontsika ianarana avy amin'ny fiandohan'ny mpamorona Jessica Walsh?
Hanokana toerana iray izahay anio handinihana kely momba ilay mpamorona sary malaza Jessica Walsh sy ny fomba nanarahany ny dingana voalohany.
Raha mitady lohahevitra ho an'ny Google Chrome ianao, amin'ity lisitry ny lohahevitra 96 ​​ity ho an'ny mpitety tranonkala dia azo antoka fa hanana ilay tonga lafatra ianao mba "hitafy" ny endriny.
Ny teknikan'ny Motion Graphics dia manondro karazana firaketana izay tsy takiana amin'ny fampiasana ny loharano rehetra izay nampiasaina taloha.
Ny Paula Scher malaza, olo-malaza amin'ny famolavolana sary, dia manome antsika ny toro-hevitra 10 lehibe ho an'ny mpamorona sary,
Motion Capture na MOCAP, lakilen'ny hetsika tena misy
Ny MOCAP na fantatra koa amin'ny hoe capture capture, dia dingana iray izay anoratana an-tsary ny hetsika iray izay atao mivantana.
Saul Bass, rain'ny trosa
Saul Bass rain'ny sary mihetsika maoderina izay niavaka noho ny endriny sary miavaka amin'ny indostrian'ny sarimihetsika.
Fanoharana ara-orinasa: Mianara mamorona torolàlana momba ny style Vector
Ny fanoharana orinasa dia ilay ampiharina amin'ny famoronana logo, marika ary ny zavatra rehetra mifandraika amin'ny famantarana ny orinasa.
Ny lakilen'ny fahombiazana dia ny fitaomam-panahy hatrany, na inona na inona asanao, ny zava-dehibe indrindra dia ny fitazonana ny sainao foana hiasa.
Raha te hahay hanao kalandrie tany am-boalohany ho an'ny mpanjifanao mora foana ianao, aza hadino ity lahatsoratra ity.
Famolavolana endrika sy fanavaozana ny teknolojia
Teny roa izay tsy isalasalana fa mifamatotra akaiky ary izany dia ny fanaovana zavatra isan-karazany mitarika fahazoana valiny samihafa.
Ny fomba hamoronana meme anao manokana amin'ny Internet mora foana
Ahoana ny fomba hamoronana meme anao manokana amin'ny Internet amin'ny fomba mora. Zarao amin'ny tambajotra sosialy ny fahaizanao rehetra amin'ny famoronana meme anao manokana.
Ny maha-zava-dehibe ny traikefan'ny mpampiasa amin'ny marika iray
Ny maha-zava-dehibe ny traikefan'ny mpampiasa amin'ny marika dia manan-danja raha toa ka tiantsika hiavaka amin'ny ambiny ny marika.
Ny antony nanaovan'ny mpanentana an-tsehatra ny fonon-dry zareo an-tsary miaraka amin'ny fonon-tànana sy rojo
Toy ny fonon-tànana, ny rojo dia nampiasaina hanamorana ny asa mafy nataon'ny mpanentana sarimiaina. Marina ny an'i Warner, Disney, ary maro hafa.
Ny mpamorona sary dia matihanina izay tsy maintsy mitantana tsara ny tsirairay amin'ireo loharano sy fitaovana ary ireo no tsara indrindra eto an-tany.
Wacom Clipboard, mamadika ireo antontan-taratasy amin'ny endrika nomerika amin'ny fotoana tena izy
Wacom dia hanomboka amin'ny faran'ny volana Jolay ny fitaovana vaovaony antsoina hoe Wacom Clipboard izay mamela hanova endrika taratasy ho nomerika amin'ny fomba tsotra.
Mamorà borosy Photoshop anao haingana ary ampio ny paozinao manokana amin'ireo tetikasanao sary. Mamorona katalaogin'ny borosy anao manokana.
Ny iray amin'ireo zavatra sarotra indrindra amin'ny fahitako azy dia ny misintona ny vatan'olombelona, ​​voalohany afaka misambotra ny antsipiriany rehetra avy eo ary mametraka azy amin'ny taratasy.
Dingana ahafahana mamorona sary famantarana tsara ho an'ny marika na vokatra miasa mahomby ary mahatratra mpampiasa maro kokoa. Mamorona sary famantarana tsara.
Ny sary nomerika dia misy fanehoana roa refy amin'ny sary miorina amin'ny matroka isa, izay mazàna mimari-droa, miaraka amin'ireo sy zerôs.
Ny fananana ara-tsaina dia tsy inona fa ny zavatra rehetra nipoitra avy amin'ny saina, avy amin'ny atidohan'ny olona iray, ka soraty ny asanao.
Toy ny mahazatra, ny terminolojia izay ampiasaina amin'ny sehatra iray dia matetika tsy takatry ny olona izay tsy ao anatiny, koa tandremo!
Amin'ity lahatsoratra ity dia holazainay aminao ny sasany amin'ireo singa izay hamaritana ny fahombiazana mety hananan'izay te ho mpamokatra sary.
Ny hierarchy maso dia iray amin'ny lakilen'ny famolavolana rehefa mamorona sary ho an'ny fanontana na fampiasana nomerika.
Ato amin'ity lahatsoratra ity dia ho fantatsika fa ny famolavolana sary dia nanao tamim-pahakingana tamina karazan-dahatsary hanaovana dokambarotra ny endrika sary.
Behance ny tambajotra sosialy lehibe indrindra ho an'ny famoronana Adobe
Behance, tambajotra sosialy lehibe indrindra an'ny Adobe ho an'ny famoronana, dia manolotra ny mpampiasa hampiasa ny tetikasany rehetra amin'ny tontolo mpamorona.
Ahoana ny fomba hanomezana ny sarinao izay vokarin'ny Instagram
Omeo ny sarinao sy amin'ny alàlan'ny programa famolavolana maimaim-poana, izay vokany Instagram izay resahin'ny tsirairay.
Manaraka izany dia hiresaka momba ireo dingana tsy maintsy harahinao ianao hamoronana modely Excel ho an'ny tetibola, izay azo ovaina tanteraka.
Ny lesoka tsy maintsy esorin'ny mpamorona sary rehetra
Amin'ity lahatsoratra ity dia hiresaka aminao momba ny lesoka mahazatra indrindra tokony tsy hananan'ny mpamorona sary.
Ovao ny lokon'ny maso amin'ny Photoshop
Ovay haingana ny lokon'ny maso amin'ny Photoshop mba hahazoana valiny tena matihanina sy azo tanterahina ho an'ny sarinay.
Ny fananana rakibolana tsara amin'ny teny famolavolana sary sy dikany dia afaka manampy amin'ny fanamorana ny zavatra sy ny asantsika.
Misoratra anarana amin'ireo fampianarana 50% ao amin'ny Trazos_ ho an'ny mpamorona sary, 3D, fihetsiketsehana na zavatra hafa manokana toy ny famokarana audiovisual.
Iza no namorona ny sary malaza mitsiky?
Iza no namorona ny kisary malaza amin'ny tsiky falifaly? Mpanakanto somary fanta-daza izy fa iray izay hanamarika ny taloha sy aorian'ny tantara.
Ny fanatsarana ny kalitaon'ny sary amin'ny Photoshop mora sy haingana dia azo atao noho ireo fitaovana avelan'ity programa Adobe avela antsika ity.
Dingana ho lasa Professional Web Designer
Amin'ny alàlan'ity lahatsoratra ity dia tianay haseho anao ny dingana vitsivitsy ilaina mba hahatongavana ho mpamorona tranonkala matihanina.
Ny maha-zava-dehibe ny famoronana anarana tsara ho an'ny marika na vokatra
Ny maha-zava-dehibe ny famoronana anarana tsara ho an'ny marika na vokatra dia afaka mampisy fahasamihafana eo amin'ny fahombiazana na ny tsy fahombiazan'ny tetikasanay.
Fahadisoana dimy hialana amin'ireo mpanjifa Web Design
Amin'ny maha-mpamorona tranonkala anao dia tokony ho fantatrao hoe inona ireo dingana tsy maintsy raisina rehefa miasa miaraka amin'ny mpanjifa ianao ary inona no ampanaovina vola.
Ny famolavolana editorial dia ny sampana volavolan-tsary izay ny tena tanjony dia ny firafitra sy ny firafitry ny karazana publication.
Mampiasà typografia misy sary ao anatiny ho mahasarika ny volavolanao, hahatratraranao vokatra tena mamorona sy mahasarika. Mora, haingana ary mampiankin-doha.
Famolavolana sary Flat na famolavolana Flat dia natomboka tamin'ny tontolon'ny famolavolana sary sy ny tranonkala taona vitsivitsy lasa izay ary eto hijanona.
Fomba ahazoana endrika hamoahana pirinty nefa tsy maty amin'ny andrana
Ny fomba fakana endrika hatao pirinty nefa tsy maty am-panandramana dia zavatra tsy maintsy fehezin'ny mpamolavola rehetra. Tena ilaina ny mandeha amin'ny famolavolana solosaina mankany amin'ny taratasy.
Fantaro ireo sary kiobanina manomboka amin'ny tapany faharoa amin'ny taonjato faha-50 ka mandraka ankehitriny ary izany dia nandritra ny taona XNUMX no nipoitra ny dokam-barotra.
Inona no lalana arahin'ny famolavolana sary?
Ny famolavolana sary dia ho tompon'andraikitra amin'ny famolavolana ireo sehatra ireo izay hamokatra maodely maodely ho an'ny orinasany.
Graffiti sy ny fifandraisany amin'ny endrika sary
Graffiti dia hampifandraisina amin'ny endrika sary saika amin'ny alàlan'ny default ary izany dia fomba iray fanehoana ampahibemaso.
Ny fivoaran'ny lohateny dia ahafahantsika mamantatra amin'ny marika voalohany ny marika na ny fironana ary ny famolavolana tranonkala dia misy ifandraisany betsaka amin'izany.
Ny loko dia ireo singa hita maso manome fiainana sy fanavahana ny tontolo iainantsika. Raha tsy misy loko dia tsy misy dikany fotsiny ny fiainana.
Ny famolavolana sary dia tompon'andraikitra amin'ireo zavatra mahafinaritra amin'ny sarimihetsika
Raha tsy misy famolavolana sary dia tsy azo atao ny manao zavatra mahafinaritra sy endrika mamorona fihetseham-po amin'ny besinimaro mankafy azy.
Ity no tantaran'ny vehivavy mpamorona
Ianaro ny tantaran'ny mpamorona vehivavy voalohany sy tena izy eo amin'ny tontolon'ny famolavolana sy ny maha-zava-dehibe an'ity sehatra ity.
Volavola amin'ny PC na Mac?
Raha iray amin'ireo manana olana ianao na hamolavola amin'ny alàlan'ny PC na amin'ny alàlan'ny Mac, dia hasehonay anao hoe iza no tsara indrindra, arakaraka izay ilainao.
Izay rehetra tokony ho fantatrao momba ny karazana rakitra amin'ny endrika sary
Amin'ny famolavolana sary dia afaka mahita endrika sary marobe isika, samy manana ny mampiavaka azy sy ny asany, ka fantaro izy ireo.
Raha mpamorona sary ianao ary vao manomboka mitady asa, dia tokony manontany tena hoe: famolavolana ho an'ny mpanjifa na famolavolana ho an'ny endrika?
Hodinihinay amin'ity lahatsoratra ity ny antony tsy tokony hanomezanao ny asanao, satria hitady anao ny mpanjifa noho ny vidiny fa tsy ny kalitaony.
Fampahalalana momba ny Pop Art izay manambara ny zava-misy mahaliana sy tena mahaliana momba ity hetsika kanto teraka tamin'ny taona 50 ity.
Ny revolisiona 3D amin'ny famolavolana sary ankehitriny
Amin'ity lahatsoratra ity dia handehandeha kely isika hijery ny fomba nivoaran'ny endrika sary 3D hatramin'ny niandohany ka hatramin'izao.
Milton Glaser sy ny sary famantarana nampalaza azy, ilay “I? NY "
Milton Glaser dia iray amin'ireo manam-pahaizana momba ny famolavolana sary sy famoahana editorial tamin'ny taonjato faha-XNUMX ary ananantsika trosa izy ireo logo izay tsy hiala amin'ny fomba mihitsy.
Tsy azonao atao ny mijanona amin'ny famakiana ireo boky fito tsy mampino ireo izay tokony hananan'ny mpamorona sary tsara rehetra ho ampahany amin'ny tranombokin'izy ireo.
Ny tsiambaratelo tsy arak'Andriamatoa Wonderful: ny typografika tany am-boalohany dia nizara ho faritra maromaro hahafahanao mampiasa ilay tianao indrindra.
Ahoana no azo hialana amin'ny fanaovana plagiarism
Manolotra fomba hisakanana olon-kafa tsy hanararaotra ny asanao izahay, satria tsy misy mahasosotra mihoatra ny miasa amin'ny zavatra iray ary angalarina izany.
Doka, varotra ary fampielezan-kevitra amin'ny tambajotra sosialy
Azontsika atao ny milaza fa ny lakilen'ny fahombiazana na izay hahatonga antsika hahatratra ny mpanjifantsika dia ny dokam-barotra, ny marketing ary ny fampielezan-kevitra.
Ny marketing sy ny famolavolana sary dia miara-miasa, satria ity farany dia hanampy ny orinasa hanatsara ny foto-kevitry ny marika.
Amin'ny maha-mpamorona sary manaja tena anao dia tsy maintsy havaozinao foana ny momba ny fironana na tsia, noho izany dia raiso ny zava-misy amin'ny 2017.
Rehefa mamorona tetikasa ianao dia mila mianatra fa tsy afaka manomboka amin'ny interface, fa ny zava-drehetra dia misy dingana vitsivitsy manaraka.
Jereo ny fomba fampiasana amin'ny fomba tsara indrindra sy ny tetika rehetra amin'ny iray amin'ireo fitaovana tsara indrindra amin'izao fotoana izao, InDesign.
Jereo ny tantara mahaliana momba ny fiantombohan'ny famolavolana sary ary jereo ny misy antsika sy ny zavatra hafa mbola tsy hitantsika
Fantaro izay asa azonao atao sy tokony safidinao arak'izay tianao indrindra rehefa miasa ianao, satria asa roa tena mitovy ireo.
Aza mieritreritra momba ny fampiharana intsony ary manomboka manoritra ilay zavatra niainana
Mandraka androany ary amin'ny maha mpamorona sary antsika dia hadinontsika ny maha-zava-dehibe ny fanaovana sary ary nifantoka bebe kokoa tamin'ny teknika fandaminana sy ny varotra izahay.